Mihetsika manivana ny vaovao mivoaka amin’ny Twitter momba ilay fanafihana tao Cabo Delgado ry zareo Môzambikàna · Global Voices teny Malagasy
Zara raha misy vaovao azo avy amin'ny fanjakàna
Voadika ny 16 Jona 2020 16:21 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, English, Deutsch, русский, Español, Português
Tetezana ao Cabo Delgado, Môzambika, 4 Aogositra 2009. Sary an'i F. Mira, nampiasàna ny lisansa CC BY-SA 2.0.
[Raha tsy misy fanamarihana manokana, mitondra mankany aminà lahatsoratra amin'ny fiteny pôrtiogey ny rohy ato anaty lahatsoratra.]
Amin'izao fotoana izao, mihetsika ireo vehivavy mpampiasa Twitter ao Môzambika mba hizara ireo lahatsary sy torohay momba ny herisetra mamely ny faritanin'i Cabo Delgado, toerana iray anjakan'ireo vondrona mitam-piadiana, efa hatramin'ny 2017 [fr].
Mihoatra ny 900 ireo olona namoy ny ainy [en] hatramin'ny nanombohan'ireo fanafihana, ary ny tatitra iray avy amin'ny governemantam-paritra nivoaka tamin'ny Febroary 2020 dia manamafy fa maherin'ny 150.000 ny olona efa ianjadian'ilay fifandonana. Tsy mbola fantatra tanteraka ireo antony nanosika ireny fanafihana ireny, fa misy tondro vitsivitsy toa manondro vondrona islamista iray mpanao an-tendro.
Vakio koa : Soritra vaovao momba ny antony manosika ilay vondrona mitam-piadiana mampihorohoro ny faritra avaratr'i Môzambika [fr]
Tsy ela akory izay, ny governemanta môzambikàna dia nandray anjara taminà fihaonana an-tampony niarahana tamin'ireo filohampirenena hafa ao atsimon'i Afrika, andrana iray mazava tsara hitadiavana fanohanana ivelany amin'ny ady atao amin'ireo mpihoko.
Andro vitsy taty aoriana, nambaran'ny filoha môzambikàna ny fahafatesan'ireo roa mpitarika ilay vondrona tomponandraikitra amin'ireo herisetra any avaratry ny firenena.
Maro tamin'ireny fanafihana ireny no niafara tamin'ny fanelezana azy taminà endrika lahatsary sy saripika tety anaty tambajotra sôsialy, indraindray dia ireo mpanafika mihitsy aza no mizara azy. Rehefa tsy misy ny vaovao avy amin'ny mpitondra fanjakana, ezahan'ireo sasantsasany mpampiasa Twitter ny manangona sy mandrindra io votoaty io ety anaty tambajotra sôsialy :
Miharatsy isanandro ny toedraharaha ao Cabo Delgado, fandripahana tsy mitsahatra, fitetezana mandrava tanàna. Rahoviana no hisy tohana avy amin'ny tafika hataon'ny Fiombonamben'ireo Fanjakàna ao amin'ny ilany atsimon'i Afrika ?
Farany, inona no tena zavamitranga ao Cabo Delgado (Môzambika) ?
kofehin-kevitra . pic.twitter.com/kcVVZDBiTp
[sary] Vohitra iray ravan'ny afo. Hita amin'ny sary ny lavenona, sy ireo hazo fisaka mitsingidina amin'ny tany ary ireo hazo tapaka. Ery aoriana indray, toeram-ponenana mbola mijoro.
kofehin-kevitra iray momba an'i Cabo Delgado.
Miangavy anareo aho, apetraho etsy ambany izay vaovao rehetra azo raisina momba ireo zavamitranga amin'izao fotoana izao ao Cabo Delgado, hifanampy isika, fa tsy hitaraindraina fotsiny !
Mba hahafahana manampy, dia tsy maintsy hainay izay miseho, ary ny governemanta tsy mampita momba io resaka io, araka izany dia tsy maintsy miainga avy amin'ny resaka miampita izahay, ary ireo lahatsary mivoaka ny zavamisy izay alefa aminay avy any [amin'ny faritanin'i Cabo Delgado]…
Tsaroako novakiako tany ho any fa ny fomba mora indrindra hambaboana tany dia ny fambolena korontana mba hanerena ny tompony handositra. Tsy misy tany mora vidy tahàka ireo any anatin'ny faritra misy fifandonana sy fahantràna. Araka izany dia manontany tena aho… Iza no mahita tombony amin'ny fividianana an'i Cabo Delgado ?
Ao anatin'io onjam-panehoana hevitra io, misy ireo olona mampitaha ny toedraharaha ao Cabo Delgado amin'izay zavanitranga tany amin'ny firenena hafa :
Tsikaritro tamin'ireo Môzambikàna maro [ny fihetsika] “Misy vidiny ny ain'ny mainty” [sic, anondroana ilay hetsika any Etazonia “Black Lives Matter”] fa tsy dia ny “Mivavaha ho an'i Cabo Delgado” loatra.
Etsy andaniny, betsaka koa ireo fampitandremana mameno ny Twitter momba ny fielezan'ny hafatra sasantsasany azo heverina ho mamitaka:
Fa tsy maintsy mitandrina fatratra isika amin'ireo vaovao aelin'io rangahy io, efa im-betsaka izy no voapaingotra noho ny fanehoana sary tsy nopihana akory tany Cabo Delgado, milaza azy ireny ho sary “tsy misy mpanana”.
Tahàka izay ihany, nisy hetsika vaovao iray nipoitra, ikendrena ny hanairana indray ireo hestika firaisankina ho entina manampy ireo olona mizaka ny firohotan'ny herisetra any amin'ny faritanin'i Cabo Delgado :
Eo am-panomanana ny fehezanteny fahefatra ho an'ilay fanentanana ho firaisankinam-pirenena ho an'i Cabo Delgado izao izahay.
Mila mpirotsaka an-tsitrapo ho amin'ireo fanomanana.
Maingavy, zarao amin'ireo namanareo mety afaka hanampy anay ireo afisy sy fanasàna #CaboDelgado_dia_Môzambika_ihany_koa #CaboDelgado
Ho an'izay rehetra mety ho afaka hanampy, na amin'ny fomba ahoana, na amin'ny fomba ahoana.
#CaboDelgado #CABODELGADOIMPORTA pic.twitter.com/Itnq9V507K
[sary] Afisy fangatahana tolo-tànana,miaraka amin'ny teny faneva natao sorabaventy : ” Tsy adino i Cabo Delgado !” Ny sary lafika dia sarina vondrona olona mitorevaka eo ambony tsihy napetraka amin'ny tany, manao sarontava. Azo vakiana anaty soratra miloko fotsy ny hoe : “Fotoana izao hanaovana izay vita ! Isan'i Môzambika i Cabo Delgado ! Mila antsika ireo rahalahintsika mialokaloka ao Cabo Delgado ao Namialo (Nampula).” Ankoatra ny fanampiana ara-bola, mangataka tolo-tànana amin'ny fitafiana ho an'ny ririnina, lamba fitafy, fitaovana fidiovana, ary sakafo tsy mora simba ihany koa ilay vondrona.